”Tsy Vitsika Isika” : Boky Vaovao Manindrahindra ny Fijerena ny lafitsaram-piainana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Desambra 2018 17:37 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Aymara, 日本語, Português, Español, English
[Amin'ny teny Anglisy avokoa ireo rohy raha tsy misy filazàna manokana]
”Amin'izay toerana andraisana ny tsy fahalalana ho hasambarana, adalàna ny fahendrena” hoy ny soratr'i Thomas Gray tamin'ny 1742. Amin'izao vanimpotoan'ny tambajotram-piarahamonina sy ny haino amanjery elektronika izao, indraindray toa tsy misy afa-tsy vaovao ratsy ary tsy misy azon'ny olompirenena tsotra atao.
Mahafantatra ilay anatra taloha ny ankamaroan'ny olona, izay milaza fa mitondra mankany amin'ny hasambarana ny tsy fahalalàna, nefa mety ho ny mifanohitra amin'izay ve no mitranga, hoe ny tsy fahalalana no miteraka ny fahantrana?
Ny boky No somos hormigas [amin'ny teny Espaniola] (Tsy vitsika isika) dia fanoherana ny fijerena ny lafiratsim-piainana misy eran'ny tontolo, sy ny fahatsapana ankapobeny ny fahaverezan'ny maha izy azy ny olona. Mihoatra nóho ny boky tsotra izy io, paikady feno anoherana ny hakiviana sy ny tsy fihetsehana. Kanefa tsy boky baranahiny, ankosotra na koa hoe ‘best-seller’ izy io. Ireo tanora Espaniola efatra mpanoratra (rohy maty), izay mampitambatra traikefa amin'ny toekarena, fanaovangazety, fampandrosoana iraisam-pirenena, fandraharahana, varotra ary asa famoronana, dia manolotra ilay tetikasa toy ny
Boky fanoherana, torolàlana ho an'ireo mahita ny lafitsaram-piainana izay nahazo fampianarana/fahalalàna, tetikasa an-dalam-panatanterahana ao amin'ny http://nosomoshormigas.org/ [amin'ny teny Espaniola], hiakam-panantenana manohitra ny krizy.
Toy izao ny fanazavàna ilay boky:
Raha vitsika isika, ho karazana biby sambatra ny olombelona. Nanjanaka ny planeta iray manontolo isika, lava kokoa ny fe-potoana iainantsika ary mahatalanjona ny zava-bitantsika ara-teknika. Na izany aza, tonga saina amin'ny halehiben'ireo fanamby tsy maintsy atrehintsika sy ireo loza ary ireo tsy rariny mbola mitoetra isika. Vondrompiarahamonina isika ary ny zavatra ataontsika, ataontsika miaraka, mitovy fiaviana isika ary, miaraka amin'ny planeta Tany, mizara hoavy itambarana. Hoavy izay miankina amintsika ny hanapahana azy.
Mizara ho toko telo ilay boky:
”Manana fahafahana lavitra nóho ny hatramin'izay hisoroka sy hitsabo ny aretina isika.”
Toko 1. Salama izao tontolo izao.
Nanatanteraka fivoarana maro tsy mampino tamin'ny sehatra maro samihafa ny olombelona nandritra izay folo taona maro lasa izay: miaina “tsara kokoa” isika, afaka mamahana sy mampianatra olona maro nóho ny hatramin'izay, nahafongatra aretina maro nahafaty taloha ary misy fihavanana bebe kokoa nóho ny hatrizay.
”Saingy mbola manavakavaka ireo andrim-panjakana iraisam-pirenentsika”
Toko 2. Mbola misy zavatra tsy zarizary.
Maro ireo hilaza fa tsy ampy izany ary tsy afaka namaha ireo fanamby ara-piarahamonina fototra ny olombelona Marina izany. Kanefa manao tsaratsara kokoa nóho ny fiheverantsika azy sy ny tian'ireo mpanahy lava hinoantsika isika.
Toko 3. Inona no atao mba hanatsaràna ny zava-misy.
Aoka izay ny fimenomenomana. Feno mpanavao ara-piarahamonina, olona mamorona hevitra sy fitaovana mba hahafahantsika rehetra miaina tsaratsara kokoa izao tontolo izao, amin'ny fomba maharitra sy ahitàna tombontsoa bebe kokoa ho an'ny rehetra, izay tsy ilàna ny famoizana ny fivoarana. Raha toa ka te hahafantatra azy ireo ianao ary maniry ny hahalala izay azonao atao mba hiainana mifanaraka amin'ny fotokevitra hijoroanao, hitanao ao anatin'ny fantina ahitàna fanavaozana ara-piarahamonina miisa 120 ao anatin'ity boky ity izany ary mbola misy bebe kokoa ao amin'ny vohikala.
Mampiditra ny Global Voices ao anatin'ny fifantenany sehatra mpanavao ny No somos hormigas.
Mampihatra ny zavatra asainy tanterahina ny ekipan'ilay tetikasa. Amin'ny alàlan'ny fampiasàna mivoatra ny infografia sy ny fanakambanana ny haino amanjery nentim-paharazana sy niomerika, manome jery mahitsy mitombina momba ny toetry ny planeta ny No somos hormigas ary manome safidy mari-pototra ho an'ny fiovàna marina.
Afaka mitopy maso ilay boky (rohy maty) ao amin'ny vohikalan-dry zareo ianao ary mividy(rohy maty) dika printy na niomerika iray. Afaka mamaky ny bilaoginy ihany koa [amin'ny teny Espaniola] ianao hahazoana vaovao sy hevi-baovao, sy hanaraka azy ireo ao amin'ny Twitter @NoSomosHormigas.